Turkey oo ku hanjabtay in uu ka noqonayo heshiiskii hakinta qaxootiga ee ay la gashay Midowga Europe – The Voice of Northeastern Kenya
Turkey oo ku hanjabtay in uu ka noqonayo heshiiskii hakinta qaxootiga ee ay la gashay Midowga Europe
Dowladda Turkey-ga ayaa ku goodisay in ay dib uga noqon doonto heshiiskii ay dhawaan midowga Europe kula gashay in ay joojiso qul qulka dadka qaxootiga ah ee u sii hayaamaya dhinaca dalalka qaaradda Europe.
Xukuumadda Ankara ayaa sheegtay in ay waxba kama jiraan kasoo qaadi doonto heshiiskaas oo ku kacayay dhaqaale badan, hadii aysan guud ahaan dalalka xubnaha ah midowga Europe si bilaasha h Visahooda u siinin dadka u dhashay dalka Turkey-ga.
Dhawaaqaan cusub ee kasoo baxay dowladda Turkey-ga ayaa waxaa shaaca ka qaaday wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Mevlut Cavusoglu.
Mr Cavusoglu oo la hadlayay wargeys kasoo baxa dalka Germany ayaa sheegay in Ankara ay awood buuxda u leedahay in ay hakiso qul qulka qaxootiga laakiin ay tallaabada noocaas ah qaadi doonto oo kaliya hadii la aqbalo rabitaankooda.
Dalabkaan ku aadan Visaha bilaashaka ah ee loo raadinayo muwaadiniinta reer Turkey oo lagu waday in masuuliyiinta Turkeyga ay mar hore soo bandhigaan ayaa waxaa dib u dhigay muran soo kala dhex galay sharci dajiyeyaasha wadankaasi iyo howlgalladii daba socday afgambigii dhicisoobay ee Turkey-ga ka dhacay bartamihii bishii July ee lasoo dhaafay.
Si kastaba ha ahaatee, Heshiiska ku saabsan joojinta qaxootiga gaaraya wadamada Europe ee sii maraya Turkeyga oo ay dhawaan kala saxiixdeen labada dhinac ayaa waxaa si weyn u cambaareeyay hay’adaha waaweyn ee xuquuqda aadanaha.
← Isbitaallada Nairobi oo wajahaya daawo la’aan
8 arday oo ku dhaawacantay School ku gubtay Mombasa →